I-Holland | Iimpawu zokugweba nokufa | I-PharmaGrade® I-Steels
Ukwazi ukumelana noxinzelelo olusetyenzisiweyo ngaphandle kokusilela okanye ukuguqulwa kweengcebiso zokujija kunye nokupheliswa.
Ukuxhathisa ngokuchasene nomonakalo owenziwe ekhaya kunye nezinto ezenzeka xa umxholo uphantsi kokulayisha nge-cyclic.
Ukuxhathisa ngokuqhekeza, ukuqhekeza, ukunamathela, ukuxhoma, okanye ukujija isipika.
Njengomnye wehlabathi elikhokelela ekusetyenzisweni kwezixhobo zethebhulethi i-Holland iye yandinceda ekwaziseni uphuhliso oluninzi nolunqabileyo kumashishini. I Holland iyaqhubeka nokutyala kwaye iqhubela inkampani phambili ngokuzibophelela kuphando nakuphuhliso kunye nokusombulula iingxaki.
Ukukhetha intsimbi elungileyo kwisicelo ngasinye sisitshixo sokusebenza ngempumelelo kwenkqubo yokucinezelwa kwethebhulethi yakho. Ukukhethwa kwensimbi elungileyo kuya kufezekisa ibhalansi efanelekileyo yezi zakhiwo zetsimbi zilandelayo:
Ukuxhathisa ukunxiba okuchasayo.
Ukuxhathisa ukunxiba okuchasayo
Amanqanaba obunzima obukhulu
Ukusebenza kakuhle kwematshini kunye nokubumba
E-Holland siye sayifumana kanye loo nto ngomgangatho wethu iPrimmaGrade® isitya sonke esiyi-ESR esulungekileyo ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo. Iinkcukacha kunye neempawu zendlela nganye yentsimbi jonga isikhokelo kulwazi olungezantsi.
I-HPG-S isandula ukuphuculwa kusetyenziswa inkqubo ye-I & Holland ye-I Holland. Isixhobo esikumgangatho ophezulu we-ESR se-punch esifanelekileyo kwizicelo ezisetyenziselwa iinjongo eziqhelekileyo eziqhelekileyo ezisetyenziswa ngaphezu kweepesenti ezingama-60 zamatyala. Umgangatho ophezulu kwezinye iitowels 'ezisemgangathweni.
Kunzima ngakumbi nangakumbi ukunxiba kunokuthelekiswa neepesi ezifanayo ezisetyenziselwa isixhobo sethebhulethi.
Iprofayili yamandla aphezulu
Isakhono esihle sepolishi (ngenxa yenkqubo ye-ESR)
Yenzelwe iimveliso zeP PharmaCote ®
Ubume obufanayo bezinto ezahlukeneyo zinika iipropathi ezifanelekileyo kunye nesiphumo sentsebenzo enxibelelene:
Ubomi obude bokusebenzisa izixhobo
Ukunciphisa iingxaki zetafile (oko kukuthi ukunamathela njl.njl.)
Yesicelo esisezantsi kwii-punches ikakhulu iingcebiso ezinzulu zeendebe kunye neemilo ezinzima.
I-HPG-P ikwaphuculwe ngenkqubo eqhubekayo ye-R & D ye-Holland. Umgangatho ophezulu wenqindi ye-ESR kunye nezinto zokufa ezifanelekileyo kwifomathi ezirhabaxa ngokukodwa. Umgangatho ophezulu kwezinye i-'primiyamu 'zesinyithi.
Umgangatho ophezulu wokunxiba xa uthelekiswa neHPG-S
Amandla aphezulu okunyanzelwa kokusebenza okuphucukileyo kokufa
Ilungiselelwe iPrimmaCote® iimveliso
Umxholo ophezulu we-chrome kune-HPG-S
Kuxhathise ukwaphuka kwaye ufe
Ukuphuculwa kokungagungqi kokuphuculwa kwe-HPG-S
Kwisicelo esisezantsi kwisifo sokufa kunye nokufakwa kweepeni ezifuna ukuphuculwa kwendlela yokunxiba.
Ikharbhaydi encinci egreyitiweyo e-tungsten etyetyisiweyo ngecobalt. Isetyenziselwe ukufa kuphela.
Amandla aphezulu oxinzelelo
Kakhulu ukufakwa kokumelana nokunxiba okuphezulu
Ukuncipha kwentsimbi ye-die borehes xa kuthelekiswa ne-HPG-P
Ukuncitshiswa kwentsimbi yokukhala kwesitayile kuthelekiswa ne-HPG-P
Iya kuhlala ixesha elide kune-HPG-D xa uxinzelelo lokwenza u-abrasive.
Isetyenziselwa ukuphucula ukungqubana nokunxiba kwama-bores afayo xa uxinzelelo lwemveliso luxhaphakile.
Ingcali ye-powder metallurgy grade grade ne-carbide yokusasazeka kunye nosayizi omncinci we-carbide enika ukugqwala okuphezulu kakhulu ngaphezulu nangaphezulu kwensimbi yePrimum. Isetyenziselwe ukufa kuphela.
Ukukhangeka okukhulu kunxibe
Ukuncitshiswa komngcipheko wokubumba ukuphendula kwizinto ngaphakathi kwezinto ezifayo (ngokungafaniyo neTungsten Carbide)
Ukucutha ukufakwa kwesibeleko kuthelekiswa ne-HPG-P
Akukho manqaku amnyama kumacwecwe
Isisombululo sengcali yokufa esetyenziselwa ukuphelisa amanqaku amnyama abangelwa yi-tungsten carbide yemveliso ethe chatha kakhulu
Ingcali ye-powder metallurgy grade grade ne-carbide yokusasazeka kunye nosayizi omncinci we-carbide enika ukugqwala okuphezulu kakhulu ngaphezulu nangaphezulu kwensimbi yePrimum. Isetyenziselwa i-punches kuphela.
Ukuxhathisa okuphezulu kakhulu
Ukumelana nokukhathala okuphezulu
Ukulungela ukwenza ipolishi elungileyo (ngenxa yokusasazeka kwe-carbide)
Ubomi bemveliso eyongezelelweyo ngaphezulu kwe-HPG-P ngenxa yokuqina kokunxiba
Kuqinisekisiwe ukwandisa ubomi bemveliso ukuya kuthi ga kwi-115% ngaphezulu kwe-HPG-P
Isisombululo sobungakanani beep punches xa sinyanzela iicomputer ezixhaphakileyo
I-HPG-SS yindawo eyi-martensitic fine carbide eyakhiwe ngentsimbi engenasiseko, isisombululo esizamile nesisetyenzisiweyo sokuvavanywa kwaye sife apho uxinzelelo lwe-corrosion luyimfuneko ephambili.
Iipropathi ezifanelekileyo zokulwa nokulwa nokuvela
Ukulungela ukwenza ipolishi elungileyo (ngenxa yesakhiwo esihle se-carbide)
Umxholo ophezulu we-chrome kune-HPG-S kunye ne-HPG-P
Ubomi besixhobo esongeziweyo xa sinyanzela ukwakheka kobom
Iip punches kwaye zife zisetyenziswe ngendlela enobuthathaka, hlamba kwiinkqubo zendawo (WIP) kunye nezinye iinkqubo zokucoca ngobukrakra
I-HPG-P ikwaphuculwe ngenkqubo eqhubekayo ye-R & D ye-Holland. Umgangatho ophezulu wenqindi ye-ESR kunye nezinto zokufa ezifanelekileyo kwifomathi ezirhabaxa ngokukodwa. Umgangatho ophezulu kwezinye i-'primiyamu 'zesinyithi
Amandla aphezulu oxinzelelo lwentsebenzo ephuculweyo yokufa
Ikharbhaydi encinci egreyitiweyo e-tungsten etyetyisiweyo ngecobalt
Kunzima kakhulu ukumelana nokungena
Ingcali ye-powder metallurgy grade grade ne-carbide yokusasazeka kunye nosayizi omncinci we-carbide enika ukugqwala okuphezulu kakhulu ngaphezulu nangaphezulu kwensimbi yePrimum. Isetyenziselwe ukufa kuphela
Ingcali ye-powder metallurgy grade grade ne-carbide yokusasazeka kunye nosayizi omncinci we-carbide enika ukugqwala okuphezulu kakhulu ngaphezulu nangaphezulu kwensimbi yePrimum. Isetyenziselwa i-punches kuphela
I-HPG-SS yindawo eyi-martensitic fine carbide eyakhiwe ngentsimbi engenasici, isisombululo esizamile saza sazama ukuvavanywa sisetyenziselwa ukubetheka kwaye sife apho uxinzelelo lwe Corrosion luyimfuneko ephambili